Mpandraharaha Malagasy Voafetra ny vola azo ampiasaina
Krizy ara-toekarena Nitotongana hatrany ny ariary tao anatin’ny enim-bolana
Vokatry ny krizy dia tsy nitsahatra nitotongana ny vola Ariary tao anatin’ny enim-bolana farany manoloana ireo vola vahiny be mpampiasa eto amintsika. 3.925 Ariary ny vola eoropeanina ary 3.360 Ariary kosa ny dolara amin’izao fotoana.
Fampandrosoana ifotony Any New York i Lalao Ravalomanana
Any New York renivohitra ara-toekaren’i Etazonia amin’izao fotoana ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana miatrika ny fihaonana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, dia ny fampandrosoana ny Kaominina sy ny governemantam-paritra izany.
Sehatra tsy miankina Hahazo fanampiana 17 miliara ariary
150 miliara ariary ny totalim-bola nampiana ao anatin’ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR). 100 miliara ariary entina anampiana ny Jirama noho ny fatiantoka misy ao amin’ity orinasa Malagasy ity.
Tetikasa TATOM Hampiroborobo ny famokarana sy ny varotra
Tontolon’ny indostria Malagasy Maro no tsy mandeha amin’izay laoniny
Fotoana elaela no tsy nahenoana ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina vaovao, Guy Rivo Randrianarisoa.
Fampidiran-ketra eto Madagasikara Hampiasana rindram-baiko vaovao
Omaly no nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny fisian’ny rindram-baiko (logiciel) vaovao ahafahana manao fanambaran-ketra ampitain-davitra (télé-déclaration).
Misy fiantraikany maro amin’ny lafiny toekarena ny fampiasam-bolan’ireo Mpandraharaha Malagasy eto Madagasikara. Raha tsy hiteny fotsiny ny famoronan’asa ateraky ny fampiasam-bola izay atao satria tsy maintsy mila olona hiara-miasa hanatanteraka ny tetikasa. Eo ihany koa ny fampandrosoana eny ifotony (développement local) ateraky ny fandraharahana atao.
Maro anefa ny olana sedrain’izy ireo, ny findramam-bola eny amin’ireo Banky maro samihafa. Anisan’izany ny fahakelezan’ny vola azo alaina noho ny fidangan’ny zana-bola alain’ireny banky ireny. Arakaraka ny halavan’ny fotoana hamerenana mantsy no itomboan’ny zana-bola. Mianina amin’ny vola kely ny mpandraharaha satria aleony mamerim-bola haingana mba ialana amin’ilay zana-bola avo be. Sakana ho azy ireo ihany koa ny fijanonana amin’ny sehatra tsy ara-dalàna ka mahatonga ny tsy fahazoana famatsiana betsaka amin’ny banky. Amin’izay resaka zana-bola izay ihany, raha 12% ny taha apetraky ny Banky foibe dia tsy maintsy maka tombony any amin’ny 4 na 5% any ho any ny Banky mpampindram-bola ka tafakatra hatrany amin’ny 16 hatramin’ny 18% araka izany ny zana-bola alainy amin’ny mpandraharaha Malagasy. Mila vola betsaka anefa izy ireo indrindra ny amin’ny tetikasa lehibe mba hanafarana entana sy ampihodinana haingana ny vola. Manaraka izany, olana ihany koa ny fifaninanana tsy ara-drariny ny fahatongavan’ny entana vahiny mora be noho ny eto an-toerana dia sakana tsy ahafahany mifaninana. Mora kokoa mantsy ny zana-bola any amin’ireny mpandraharaha vahiny ireny ka antony iray mahatonga azy hivarotra mora ny entany rehefa tonga eto amintsika. Tokony hojerena haingana ny olan’ireo Mpandraharaha Malagasy ireo fa tsy iandrasana vina ela intsony satria efa halohalika ny ranom-bary ary inoana fa hisy fehin-kevitra mafonja hivoaka aorian’ny fivoriana hotanterahan’izy ireo izay tsy ho ela.